कस्तो आपत् ! श्रीमतीलाई लोग्नेको एलर्जी, सँगै बस्छन् तर मोबाइलमा कुरा गर्नुपर्छ – ToplineKhabar
कस्तो आपत् ! श्रीमतीलाई लोग्नेको एलर्जी, सँगै बस्छन् तर मोबाइलमा कुरा गर्नुपर्छ
जीवनमा सबैभन्दा नजिकको सम्बन्धमा रहनुपर्छ- श्रीमान् र श्रीमती । एक अर्काबीच सहवास, सहभोज, सहअस्तित्व, सहकार्य, कुराकानी, मायाप्रेम आदि साटिन्छन्, दिनदिनै । तर जब सँगै जीवन बिताउने लोग्ने स्वास्नीबीच बोली नै बार्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ तब कस्तो सकस पर्ला ?
लोग्ने स्वास्नी एकआपसमा जीवनभर नै बोल्न नपाउने कुराको कल्पना गर्न पनि कठिन हुन्छ । तर अमेरिकामा एउटा दम्पती यस्तै बाध्यतामा छन् । उनीहरु सँगै त बस्छन् तर एक अर्कासित प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाउँदैनन् । आपसमा कुराकानी गर्नुपरेमा उनीहरुले मोबाइल फोनमा कुरा गर्नुपर्दछ ।
यो समस्याको बाबजुत पनि दुबैजना एउटै घरमा बस्छन् । दुबैजनाले संक्रमणबाट बच्न सदैव मास्क लगाउँछन् । जोहन्नाको कैयन् पटक केमोथेरापी पनि भैसकेको छ । तर अझै रोग निको भैसकेको छैन । कुनै दिन उनको रोग निको भएर सामान्य जिवन जिउन पाउने आशा उनीहरुमा छ ।
← चिसोले निमोनियाको सिकार बन्दै भूकम्पपीडित
तीन दलको सहमति ‘हावादारी’ : बैशाखमा चुनाव असम्भव ! →